न्यूयोर्कबाट प्रधानमन्त्रीसँग अन्तर्वार्ता– नेपालको शान्ति प्रकिया कथा जस्तो छ, सुन्दा सबै खुशी हुनुभयो'
न्यूयोर्क – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताका लागि मानवतालाई पूर्णता दिने खाना, नाना र छानायुक्त प्रजातन्त्र आवश्यक भएको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको ७३औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यहाँ आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले महासभाको समाचार सङ्कलन गर्न आफूसँग आएका सरकारी स्वामित्वका र निजी क्षेत्रका पत्रकार तथा अमेरिकामै क्रियाशील पत्रकारलाई संयुक्त रूपमा दिएको अन्तर्वार्तामा एउट मानिस सम्पूर्ण मानिस हुनुपर्ने र जसले मानवलाई पूर्णता दिनसक्छ त्यही नै पूर्ण प्रजातन्त्र भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
“हामीसँग प्रजातन्त्र छ तर खाना छैन भने प्रजातन्त्र काम लाग्दैन”, एक प्रश्नको उत्तरमा उहाँले भन्नुभयो ।
यस पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
महासभा महाधिवेशन बाहिर भेटघाटमा कस्ता अभिव्यक्ति आए ?
भोलिको महासभालाई सम्बोधन गर्दा के सन्देश दिन खोज्नुभएको छ ?
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ आन्तरिक रूपमा अति आवश्यक छ तर विभाजित विश्वमा नेपालले कसरी सहयोग प्राप्त गर्ने ?
शान्ति स्थापनामा आएको रकम घट्दो छ । विरोध पनि छ नि ?
विरोध केका लागि ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा स्तरीय ढङ्गले स्पष्टताका साथ आफ्नो कुरा राखिँदा, नेपाली जनताका कुरा दुनियाँलाई बताउँदा, नेपाल उन्नति र विकासको बाटामा जान चाहेको छ भन्ने कुरा जानकारी दिन लाग्दा, नेपालको प्रतिष्ठा माथि उठाउँदा विरोध हुँदैन । नेपालमा बहुमतको स्थिर सरकार बन्यो वा स्थायी सरकार आयो भने नेपालले भ्रष्टाचार रोक्छु, सुशासन दिन्छु, अब आर्थिक उन्नतितर्फ ध्यान दिन्छु भन्यो भने विरोध हुँदैन ।
हारियो भनी आफैँलाई नोक्सान गर्ने विरोधको अर्थ हुँदैन । विरोधको आधार चाहिन्छ, आलोचना आधारयुक्त हुनुपर्छ, सुझाव र टिप्पणी आधारयुक्त हुनुपर्छ । विरोध मन पराउनुपर्ने कारण छैन र विरोधसँग हच्किएको पनि हैन । निराधार, अर्थहीन, अनावश्यक, अनुचित विरोध गर्ने आफैं एक्लिने कुरा हुन्छ र जनताले बुझ्छ । जनतालाई मूर्ख बनाउँछु भन्दा जनताले बुझ्छन् । आफ्नै मर्यादाका लागि उपयुक्त ढङ्गको व्यवहार सबैलाई उचित हुन्छ ।
शान्ति सेनामा खर्च कटौतीको कुरा नि ?
भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग भएका वार्ताका विषय ?
स्थायी कूटनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने कुरा ?
– हाल नेपाली नियोगमा कार्यवाहक प्रमुख सक्षम र अनुभवी हुनुहन्छ । धेरै हतार गर्नुपर्दैन । यस्तो कुरा कर्मकाण्ड होइन, काम चलाउन निकै अनुभवी समूह छ, हतारो गर्नुपर्ने अवस्था छैन । धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले विलम्ब भएको हो, अब छिट्टै राजदूतको चाँजोपाँजोको काम हुन्छ । रासस / सुरेन्द्रबहादुर नेपाली
असोज ११, २०७५ मा प्रकाशित
दीपाश्रीको होली सम्झना : ‘ज्वाइँको मुखमा गोबर दलेपछि १ वर्षसम्म बोलचालै बन्द’ [अन्तर्वार्ता]
चिकित्सा शिक्षामा पनि नेपाली सेनानै अब्बल काठमाडौँ–नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान मेडिकल शिक्षा प्रदान गर्ने अन्य कजेलको तुलनामा अब्बल देखिएको छ । संस्थानको सातौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज भण्डा...
ग्यास्ट्राइटिस नेपालीको आमसमस्या, तपाइँलाई पनि छ भने यसो गर्नुस्